Vegan dị mma maka ịgba ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Vegan ịgba ịnyịnya ígwè - nkọwa zuru ezu
Vegan dị mma maka ịgba ígwè?
Onye anaghị eri anụnavegannri nwere ike ịdị elu na nri ndị nwere fiber, nke nwere ike jupụta gị ngwa ngwa n'enyefeghị caloric ike dị ukwuu. Nke a dị mma ma ọ bụrụ na ị na-anwa ịwụfu otu kilo ma ọ bụ abụọ mana, ọ bụrụ na ị nọ na nnukwu ọzụzụ ọzụzụ, ọ nwere ike ịhapụ gị nnukwu mmanye.Mar 10 2015
Ka ọ dị ugbu a ị nwere ike ịhụla ederede na nso nso a na GCN nke anyị nyochara n'ime ajụjụ nke ma ọ ga-ekwe omume ịbụ onye na-agba ígwè vegan maka ọtụtụ afọ. Azịza ya bụ n'ezie ee, ọ bụghị ya? - Kpamkpam, Simon. - Eeh.
Ọfọn, ọ nwere ike kpatara ajụjụ ole na ole maka gị, n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịgbaso nri na-enweghị anụ ma ọ bụ nri sitere na osisi ma ị bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè na-anụ ọkụ n'obi mgbe ahụ anyị chere na anyị ga-aza ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị a, dị ka actually na-eme ya. Nigel, ị ga-ekwu okwu banyere ihe site na ahụmịhe gị n'ihi na ị na-eso usoro nri osisi ugbu a. (soft hip-hop beats) Tupu anyị agaa n'ihu, kedu ka ị mere? - Dika m gwara gi, o juru m anya etu o si eme m obi.
Nri ọ bụla m nwere tupu m ga-enweta ngwaahịa anụmanụ. Ọ nwere ike ịbụ yogọt, cheese, ọkụkọ, ihe ọ bụla? r, ibe anụ, na onye ọ bụla ma ọlị. Echere m na m ga-ata ahụhụ, echere m na ọ bụ n'ezie, na-efu efu.
Ma achọpụtara m na atụfughị ​​m ya ma ọlị. Akụkụ nke ihe m mere mgbe m malitere nke a, enwere m ule ahụike anọ. Enwere m ule ọbara m niile, emere m ule ahụike, ma ịgba ọsọ ma ịgba ịnyịnya, ihe mejupụtara iji hụ etu ihe siri gbanwee oge, izu asaa na ọkara, furu efu asatọ nke abụba m na uru ahụ m nwetakwara banyere a kilogram.
Ugbu a, ana m emega ahụ obere karịa ka m ga-eme. Ma, ịmara, eziokwu ahụ bụ na m na-arụ ọrụ na nri a maka ihe dịka awa 12 n'izu dị m mma n'ezie Banyere ihe ndị mejupụtara, ọ bụ ihe ziri ezi ịsị na ị gaghị echegbu onwe gị ọzọ, mana ị ga-eche iche iche banyere nri gị. - Eeh, ihe m na-ekwu bụ, ọ bụrụkwa na m ga-emere ndị mmadụ anụ anụ ogologo oge, ihe ndị a bụ ihe ndị mmadụ na-eme.
Yabụ, n'ezie, ọtụtụ ihe anyị na-ekwu maka ebe a bụ maka ndị anyị nwere ike ịkpọ vegans nwere nnukwu mmụọ ma ọ bụ ndị anaghị eri anụ. Ha wee sị, 'Ọ dị gịnị ka m ga - eme? O siri ike? Kedu ihe m kwesịrị iji nweta? ”Otu n’ime nkatọ ndị mmadụ na-akatọ m mgbe m bidoro atụmatụ nri m bụ na ha na-elekarịkarị akwụkwọ nri na ihe ndị na-edoghị anya anya na ebe ha ga-enweta ha. Akụkụ nke mkpebi m bụ ijide n'aka na m nwere ike ịzụta ihe ọ bụla m ga-eji site na nnukwu ụlọ ahịa mpaghara m iji mee ka ọ dị mfe dịka o kwere mee.
Mana ihe m ga - eme, gbalịa ime ka ihe dị mfe dị ka o kwere mee, ma gbakwunye otu aghụghọ, ọ bụ m ga - agwakọta ihe ụfọdụ. N'ebe a, anyị nwere ihe m na-akpọ grains mbuaha. Kedu ihe bụ ngwakọta nke ọka, yabụ nke a bụ nchikota quinoa, spell, ọka bali na osikapa basmati. - Ya mere, kama iri naanị osikapa ọcha ma ọ bụ pasta nkịtị, naanị ị ga - agwakọta ihe ntakịrị - ana m agwakọta ya ntakịrị.
Site na ịgwakọta ya ọnụ ọ na-ewepụta oge mgbe m chọrọ esi ya. Ihe m kwesiri ime bu itinye ihe a na osikapa m, tinye mmiri ma gbanye ya. Otu a ka ọ dịkwa na agwa, agwa agwa m enwetaghị nchikota agwa dị iche iche, tinye ha ebe a, gwakọta ha ma m tinye ha na cooker nwayọ, gbanye ha n'ụtụtụ ma na chi na n'abalị a bụ na nke ọ bụla n'ime ndị Efrata nwere ya pụrụ iche ekwukwa n'akwụkwọ mbinye aka.
Site na ịgbakwunye ihe dị iche iche ọnụ ị gbanwere ya. Kama ịbụ naanị nri a kapịrị ọnụ ị nwere ebe a, ọ na-enye gị ohere sara mbara. Ihe kacha amasị m bụ abụba na protein, anyị kwuru okwu na mbụ na mbụ, anyị kwurịtara ọtụtụ ihe gbasara protein, na abụba dịkwa mkpa.
Ndị mmadụ amataghị mkpa abụba dị, ihe m ga-eji ọtụtụ bụ ihe dịka mkpụrụ agwakọtara. Mana ihe anyị ga - eji mkpụrụ osisi mee, ọ bụrụ na anyị erie ha, anyị na - enye ha n’aka anyị. Yabụ ihe anyị ga - eme bụ, anyị ga - egweri ha, ihe m na - eme bụ na m ga - agwakọta mkpụrụ osisi ahụ na ụfọdụ pistachio, ụfọdụ koko
Aga m agbakwunye ya mkpụrụ osisi ole na ole na ya, m ga-agwakọta ya. Ana m eme nke a na blender m otu ugboro n’izu ma jiri ya na izu niile. Nke ahụ na-enyere m aka inweta abụba ndị dị mkpa tinyere protein na mgbakwunye ihe ndị dị na nri m.
Enwere otutu, otutu otutu ebe. Fọdụ n’ime ihe dị ezigbo mfe ugbu a bụ ihe ndị dịka falafel a. Ndị a dị ka paụnd iri na ise site na Lidl.
Ọ dị mfe ịme nkụ ugbu a wee nweta igwekota falafel a. Ihe ikwesiri ime bu itinye mmiri. Echere m na sausaji ndị a dị ezigbo mma.
Ndị a bụ sausaji anụ ọhịa bekee, nụrụ ụtọ nke ọma. Na mụọ Have nwere oge dị ukwuu na osikapa a na-esi esi nri, tinye ya na microwave maka nkeji ole na ole. N’oge na-adịbeghị anya, amalitere m iri ọka vegan.
Ogologo oge, ọka abughi vegan n'ihi na ha tinyere akwa na ya iji jikọta ya. Ugbua ibido mebe oka vegan. Nke a dị ezigbo mma na Thai Thai curry. - Ee, aga m ekwu na anyị ga-enwe nrụgide n'ezie, ọ bụrụ na ọ bụghị, nke a abụghị nri. - Kpamkpam.
Anyị ga-agba mbọ hụ na anyị nwetara akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi, wdg. Ndị a bụ ole na ole n’ime nri ndị bụ isi. Ọzọkwa, Achọrọ m igosipụta ihe anyị nwere ike nweta protin vegan ugbu a.
Nke a bụ nchikota protein, hemp na osikapa. Ihe dị iche na nke a bụ na a nwalela ya iji belata ihe egwu nke mmetọ ahụ wee bụrụ ule ọgwụ. - Ọ dị mma, ka anyị kwuo maka mgbakwunye, nri? N'ihi na mgbe anyị na-ekwu maka ndị egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ ndị na-azụ ọzụzụ siri ike ma ha ka nwere ike iche maka ma ha bụ nri nri niile ma ọ bụ ihe ọkụkụ.
Ikekwe ha kwesịrị ichetụkwu banyere ya. Yabụ kedu ihe ị ga-akwado mgbe ahụ n'ihe metụtara mgbakwunye nri? Naanị iji jide n'aka na akara niile dị - Ihe m na-atụ aro ya, na ọtụtụ ihe mgbakwunye m kwuru maka ya, bụ ihe m ga-agwa onye na-eme egwuregwu na-eri nri agwakọta. Offọdụ n'ime ha nwere ike ịnọ gburugburu ihe ụfọdụ dịka beta-alanine, ụfọdụ nwere ike ịbụ ndị okike - yabụ ndị a bụ amino acid? - amino acid.
Ihe kpatara nke a, ọkachasị onye egwuregwu anaghị eri anụ, nwere ike ịbụ n'ihi na ka anyị na-enweta protein niile anyị ga-achọ n'ime ya, ogo B-alanine ma ọ bụ creatine na nri protein sitere na obere ntakịrị, ọ bụghị ezigbo nsogbu nye onye naanị onye na-eme egwuregwu klọb ma ọ bụ nke dị oke njọ, mana ikekwe maka onye bụ ọkachamara egwuregwu ọ nwere ike ọ gaghị ezu, yabụ iwere ya n'ụdị mgbakwunye nwere ike ịba uru. Mana m ga-akwado ọkachamara n'egwuregwu. Echetara m mgbe ị na-anya ụgbọala anyị ji B-alanine rụọ gị afọ iri na abụọ gara aga.
Ma ị dị ezigbo njọ dị ka onye na-eme egwuregwu. - M gbalịrị, ee. (ọchị) - E nwekwara ụfọdụ micronutrients kwa.
Dị nnọọ ka ígwè karịsịa bụ ihe, ọbụna ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enwekarị ọkwa dị ala dị ala. Ferritin bụ ụlọ ahịa ígwè. Anyị na-echekwa iron dị ka ferritin.
Jiri ferritin a maka ihe dị ka ime haemoglobin, nke na-ebu oxygen na ọbara, yana myoglobin na akwara, nke na-enyere aka iburu oxygen na akwara. Ọtụtụ mgbe, ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere oke ọkwa ferritin dị ala, yabụ anyị na gị na-eji mgbakwunye mgbakwunye ígwè; na ọzọ, na a vegan na-eme egwuregwu n'ihi na ụfọdụ nri anyị nwere nwere ike ịnwe obere iron na ha, anaghị m ekwu na ị gaghị enweta ihe ị chọrọ, mana nwere ike ịdị ala, adịchaghị ka vegan An iron supplement nwere ike ịba uru. Calcium bụ nke ọzọ kwa.
N’ebe a kwa, ọ bụrụ na anyị ewee ọtụtụ mmiri ara ehi, anyị ga-enweta calcium niile anyị chọrọ n’ụba. Mana na nri osisi, anyi nwere ike idi obere na calcium. Enwere m mmasị dị ukwuu na omega-3s kemgbe etiti afọ 90, mana ugbu a, anyị na ndị ọrịa cancer na-arụkọ ọrụ ma gbalịa iji omega-3s belata ụfọdụ mgbu akwara nke ndị ọrịa kansa nwere.
Enwere m mmasị a mgbe niile. Ọbụna na ndị na-eme egwuregwu na-ejide n'aka na ha nwetara omega-3 fatty acids bụ ihe anyị chere dị mkpa. Ọzọkwa, nke a bụ ihe nwere ike ịbụ ihe ịma aka karị na nri sitere na osisi.
Anyị kwesịrị ichetụ ntakịrị n’ebe a. Ihe dika nkpuru, omega ifesa ụdị ngwaahịa. Ihe dị iche Mkpụrụ ndị ị nwetara, mkpụrụ osisi chia, mkpụrụ flax niile bụ ezigbo ezigbo abụba.
Ọ dịtụ ka ndị na-edozi ahụ, ịgwakọta ha ọnụ ga-enyere anyị aka ị nweta abụba ndị anyị ga-eri na nri ehihie anyị dị ka ube oyibo, bụ isi mmalite abụba, pistachios na ozugbo ịmalite ịmalite iri ha ị nweghị ike ịkwụsị. Nnukwu isi abụba, ezigbo isi iyi nke protein na ihe ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị na ha bụkwa antioxidants, yabụ ezigbo nchikota akụ na ebe ahụ.- Ugbu a, dị ka Brit, Nigel hụrụ m n'anya nke ukwuu, Elfer na ehihe tii.
Anọ m na nri m. Na-atụ aro yogọt na otu mkpụrụ osisi, ụtụtụ na ehihie. Kedu ihe bụ vegan ọzọ? - Ihe m ji n’ehihie n’oge a bu ijiri pistachios.
Nke ahụ dị ntakịrị karịa ijiri pistachios. Otu ije ozi ga-abụ ezigbo aka. Otu n'ime ihe ndị ọzọ, anyị bịara ebe a na anyị hụrụ n'anya, bụ brownie nke m mere. - Nke ahụ ga-aka mma na otu iko tii ma ọ bụ kọfị, echere m. - Kpọmkwem. (ọchị) Ma pistachio bụ nnukwu nri.
Ihe ndị dị ka ogwe itoolu, ndị a bụ ihe mụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala ọkachamara jiri ọtụtụ afọ. Echetara m mgbe Rob Hayles meriri na National Road Race Championship? - 2008. - Nke ahụ bụ ihe o jiri mee ihe mgbe ọ meriri nke ahụ, o ji Ogwe Itoolu.
Unere, oke nri. Dịkwa oke maka inweta ihe dịka potassium wdg. Ihe ndị a niile bụ ezigbo nri dị mma, mana ọ bụ ebe dị mma.
Otu ndudue ndị mmadụ ga-eme bụ enweghị nri nri, yana nri sitere na osisi gụnyere ịhazi karịa. Ọ bụrụ na m na-eme njem ebe ọ bụla m ga-ejide n'aka na m ga-ewere pistachios, m na-ewere ụlọ mmanya itoolu, m na-ewere banana, yabụ ana m ewere ihe oriri a - Nnukwu ihe. Nigel, daalụ maka nke ahụ.
Iji recap, ụfọdụ isi ihe bụ ịgwakọta otu nri gị. Ya mere, anyị nwere mkpụrụ osisi agwakọtara gị, mkpo gị na-agwakọta, mkpụrụ osisi gị agwakọtara naanị iji jide n'aka na profaịlụ nri. Ọ ziri ezi? - Kpamkpam, ee.
Mix na-agwakọta ha - Jụụ. Mgbe ahụ anyị nwekwara nri siri ike nke ị na-ekwesịghị ileghara anya. Sogan sausaji ma ọ bụ falafel dị njikere, ihe ndị a na-eme ka ndụ dị mfe.
Mgbe ahụ anyị nwere ihe mgbakwunye anyị, yabụ ọ bụrụ na ị na-eme mgbatị ahụ ikekwe ọ ga-abụrịrị na ị ga-atụle ịgbakwunye na nri gị. E kwuwerị, ọ na-abịa ịhazi - a ga-ahazi ya, kpam kpam - ịhazi ya. Nri, wee lelee ụfọdụ ederede ndị ọzọ anyị na Nigel rụkọ ọrụ.
ugwu igwe okpu igwe
Denye aha GCN kwa, pịa ụwa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ edemede ebe anyị kwurịtara ma ọ ga-ekwe omume ịbụ onye egwuregwu vegan, pịa ebe ahụ Ma enwekwara ụfọdụ usoro nri, pịa ebe ahụ maka otu n’ime ha.
Gịnị ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè vegan na-eri?
Ọ bụ echiche zuru oke na anyị kwesịrịrieanụ na mmiri ara ehi maka protein - e nwere ọtụtụ isi mmalite nke ezigbo protein na-edozi ahụ (lentil, agwa, chickpeas, pasta, osikapa, akụ, bekee, tofu, ntụ ntụ protein dịka Hemp & Soy bara uru maka egwuregwu).Ọgọst 4 2016
Pro nwere ndị na-agba ịnyịnya ígwè pro ọ bụla?
Nbili nkeveganonye na-eme egwuregwu
Ndị ọzọndị na-agba ígwè vegangụnyere Adam Hansen (Lotto Soudal), Christine Vardaros (StevensCygba Progba), Catherine Johnson (Elite CX champion) na Paralympian David Smith MBE.Jenụwarị 10 2020bọchị 2020
Nri nwere ike bụrụ isiokwu na-akpata mgbagha n’ebe a na GCN. Otu akụkụ na-agbakwụnye ọtụtụ mkparịta ụka, karịa breeki diski, karịa sọks ogologo, ọbụlagodi karịa Lance Armstrong, na ọ bụ veganism. You bụ onye vegan ọkachamara ịgba ígwè? Yabụ anyị chere na anyị ga-anwa ịlele nke a ozugbo.
Nzute a nutritionist onye na-arụ ọrụ na World Tour ìgwè na ọkachamara na-agba ígwè ruo ọtụtụ afọ m na-amụ na-eme egwuregwu na osisi ndị dabeere nri. (egwu udo) Mgbe ahụ, ka anyị tụlee ajụjụ na-ere ọkụ n'isi. Nwere ike ịbụ onye na-agba ígwè vegan pro? - Nke ahụ bụ a n'ezie na-akpali ajụjụ.
Otu akụkụ nke echiche m ga-eleba anya na nri na-edozi ahụ na nri erimeri, bụ ihe onye ọkachamara na-eme egwuregwu nwere ike ime? M 100% kwenyere na mmadụ nwere ike ịghọ onye na-agba ịnyịnya ígwè ọkachamara. Ajụjụ bụ, olee otu ị ga - esi mee ya iji jide n'aka na omume ahụ adịghị emebi ịme (egwu na - ada ụda) - Anyị makwaara site na mkparịta ụka gara aga na gị na protein bụ n'ezie akụkụ dị mkpa nke nri onye na - eme egwuregwu. Ugbu a ọ bụ maka protein dị elu? Mmiri ara ehi na anụ nwere profaịlụ protein nke yiri nke anyị.
Ma ọ bụ ọ bụ n'ezie ajụjụ nke ọtụtụ? - Na protein, anyị nwere amino acid ndị a, ihe owuwu ụlọ, na ihe anyị bụ, anyị nwere amino acid dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha anyị kpọrọ dị mkpa, yabụ, anyị ga-enweta ha site na nri, na ndị ọzọ ahụ na-agbanwe ụfọdụ ndị ọzọ n’ime amino acid ndị ọzọ. Yabụ ọ bụrụ na anyị enwetaghị amino acid ndị a dị mkpa site na nri anyị, ọ ga-emetụta ogo ihe ọ ga - eme n’ahụ. Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na anyị enweghị ike ịnweta amino acid ndị a dị mkpa sitere na ngwaahịa na-abụghị anụ na mmiri ara ehi.
ezigbo ịgba ígwè
Ime nyocha maka ọtụtụ nri, ọtụtụ nri protin, yabụ ọ na - enye anyị ụdị f amino acid - anyị maara ihe anyị ga - agbasi mbọ ike iji nweta otu akụkụ nri anyị. Know mara, carbohydrates na-edozi ahụ, ihe ọ bụla. Ma nke ahụ ọ ga-esi ike na nri sitere na osisi? - Anyị kwenyesiri ike na ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-eme egwuregwu na-arụsi ọrụ ike ma anyị na-eri ihe dị ka calorie 4,000 kwa ụbọchị, enweghị nsogbu ọ bụla na ịnweta oke protein anyị chọrọ site na nri sitere na osisi cheta na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịbụ onye na-agba ịnyịnya Ihe ịma aka abụghị ịnweta nri, ihe ịma aka bụ ka ịdebe ya mgbe ha na-agba ọsọ mgbe ha na-eme njem Nri mgbakwunye nke m ga-atụ aro nye ndị na-agba ịnyịnya gị vegan.
Ma ndị a nwere ike bụrụ otu ngwaahịa m ga-atụle onye na-abụghị anụ anụ. Ka obu ihe obu na mgbe ozo, i gha enwe obi uto ma a juo gi ajuju ndia 10 afo gara aga I gha enye m otu azịza a? - Enwere m mmasị na ihe ndị dịtụ obere. Na nwunye m bụ onye anaghị eri anụ ruo afọ iri atọ. A na m esi nri ihe niile n'ụlọ, yabụ m na-esiri nwunye m nri nri anaghị eri anụ ma site n'echiche egwuregwu, enwere m mmasị na ya, n'ezie site na ụfọdụ ọrụ mụ na unu rụkọrọ na GCN ebe anyị na-eme isiokwu na anyị na-ekwu maka mgbake.
M na-ekwukwa mgbe niile banyere ihe dị ka mmiri ara ehi na ọkụkọ na ihe ndị dị ka ya. Na ndị ziri ezi hapụrụ, chere nke abụọ, enwere protein ndị ọzọ. Nke ahụ mere ka m chee echiche banyere ihe ndị ọzọ na nke ahụ.
Nke ahụ dịkwa mma site na echiche sayensị, n'ihi na ọ na-ama m aka dị ka ọkachamara iji chee echiche banyere nghọta m na ihe ọmụma m. laghachi ma lee ya anya. (egwu dị ụtọ) - Ya mere, isiokwu ndị mmadụ na-eche nwere ike ị nwere nri sitere n’osisi, lee mgbe ndị mmadụ na-eri nri na-adịghị mma? - N’ezie ajụjụ a, ahụtụbeghị m onye egwuregwu m soro rụọ ọrụ, ọ bụ ọkachamara ịgba ígwè, ọ bụ otu? Mmega, onye ọ bụla m chere na a na-emebi maka enweghị oke protein - Mmasị - Ma mgbe ndị mmadụ chere maka protein mgbe ha na-emega ahụ, ha na-eche echiche banyere akwara.
Mgbe ha na-echekwa akwara ahụ, ha na-echekarị ya n'akụkụ akụkụ ahụ. Dị ka oke nke uru ahụ. Ma ọ bụchaghị na ije anyị na-akpọ akwara emep uta eri, n'ezie muscle emep uta eri.
Mana ihe dị ezigbo mkpa bụ ihe ndị dịka mitochondria. Dịka onye na-agba ịnyịnya ígwè, mitochondria dị ezigbo mkpa n'ihi na ọ bụ ebe a ka anyị na-ewepụta ike, ATP. Ndị a niile bụ protein.
Ekwenyere na ahụ na-edozi protein ahụ, protein anyị niile, n’ime ihe dị ka ọnwa atọ. - Mmega Nutritionists Na-echegbu Protein N'ihi na, M ziri ezi Mgbe m na-eche Mgbe You? You nwere oke protein, ị na-ere ya ọkụ ma ọ bụ na-ewepu ya? - Ahụ bụ ezigbo mma na oxidizing na mmanụ ụgbọala anyị na-eri. Yabụ mgbe anyị jiri protein karịa ihe anyị chọrọ, ahụ na-ewepu nitrogen ahụ na ọkpụkpụ agbapụrụ agbapụ nwere ike iji maka ike, enwere ike iji ya maka nchekwa.
Offọdụ n'ime protein ndị ahụ nwere ike ịtụgharị ozugbo na carbohydrates. Yabụ, ahụ ga-eji ya dịka mmanụ. - Ziri ezi.
Nigel, nke ahụ bụ ezigbo osi ite na-adọrọ mmasị, anyị ga-eri nri Nigel na canal n'oge na-adịghị anya. Ma n'ezie, aro ole na ole ọzọ banyere otu ị ga - esi bụrụ onye egwuregwu na - enweghị anụ. N'ihi na obi abụọ adịghị ya na ọtụtụ ndị ga-ahụ onye a ga-achọ ịmụ.
Tupu anyị agawa, akwụkwọ a n'ihu anyị bụ akwụkwọ nke Nigel, Fueling the Cycling Revolution. Ya mere gwa anyị nkenke, dị mma, enweghị ntaramahụhụ ezubere, n'ezie enweghị ụta ezubere, gịnị ka ndị mmadụ ga-atụ anya mgbe ha dị? guo? - Nke a bụ ose nke ihe karịrị afọ 30 nke ọrụ ugbo na ịgba ịnyịnya ígwè, ọ na-alaghachi ikwu, ihe karịrị 30 afọ gara aga mgbe m na-enyere mama m aka na oge elekere 12 nke North Mids oge, ebe ị maara, na inye nri osikapa ya. Na mgbe afọ iri abụọ na ise gachara ihe yiri ya na Bradley Wiggins na Chris Frommein na Tour de France.
Enwere usoro nri maka ndị nwere mmasị na nri anụ. Yabụ echiche na akwụkwọ ọ na-ekwu maka ụfọdụ akụkụ ọrụaka nke ihe oriri. Ọ na-ekwu maka ụfọdụ akụkọ pro, eh? anyị na pro ụwa.
Ma na ọ nwekwara ụfọdụ Ezi ntụziaka maka ndị mmadụ ya mere m gbalịrị ime ka ọ bụrụ nke zuru oke dị ka o kwere mee Ugbu a, m na-atụ aro ka ị gaa ebe ahụ. N'ihi na obi abụọ adịghị ya na a ga-enwe arụmụka ahụike n'okpuru isiokwu a. Ma hụ na ị debanyere aha na GCN tupu ị hapụ edemede a.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ole na ole n'ime isiokwu ndị ọzọ na-edozi ahụ, ị ​​nwere ike iru ha n'ebe ahụ, ma ọ bụ ebe ahụ n'okpuru.
Kedu ihe onye na-agba ịnyịnya ígwè vegan na-eme maka ndụ?
Zute Tyler Pearce a 30 afọ pusi-2 ụzọonye na-agba ígwèna NCNCA nakwa nwoke na-arụ ọrụ ezinụlọ. Pearce malitereịgba ígwèdị ka ọrụ nkuzi ọzụzụ maka onye Brazil Jiu-Jitsu na 2010 mana ọ gbanwere ndụ ya ngwa ngwa ka ọ dabara n'ime egwuregwu nzuzu nkeịgba ígwè.
Tom Brady vegan?
Toma na-emezigharị ihe dị kavegan. Ọ bụ ezie na ọ na-etinye ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na efere ya,Tomanakwerela usoro nri na-agbanwe agbanwe.
Ndị anaghị eri anụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ?
A na - ahụkarị abụba ndị dị na ngwaahịa anụmanụ ma nwekwuo ume iji mebie, na - echekwa ya dịka abụba kama ịtụgharị ya na ike bara uru, na - ahapụ obere ikena-agba ọsọ. N'enyeghị iwu nke a,ndị anaghị eri anụna-erite uru site na ike ozugbo nke dị mma maka oge (HIIT) ma ọ bụ ọzụzụ ike.bọchị 2020
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji eri unere?
Carbs ga-enye gị etiti oge. Mana obere kalori ha pụtara na akpa uwe gị nwere ike ọ gaghị adabara ọtụtụ ndị ịchọrọ: “Maka ibundị na-agba ígwè, ogologo ogologo nwere ike ịghọ aunererie nri, 'Seebohar na-ekwu. Ọ ga - agbakwunye calorie (nke ahụ bụ ihe dị mma: ihe oriri ọzọ!) Ma chịkwaa shuga shuga.Eprel 27 2018
Ndi ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike iri ihe ọ bụla ha chọrọ?
I nwere ike iri ihe masịrị gị- manaọ bụọ bụghị ezigbo echiche ma ọ bụrụgị'reagu ike banyere ahụ ike gị, hapụ ya na ahụ ike gị. Ee,gịM ga-ebu obere abụba karịa ma ọ bụrụ nagịnọdụrụ ala na sofa, managịAga m aka mma oge, yana ịrịa ọrịa iku ume ole na ole na nsogbu ahụike ndị ọzọ, ma ọ bụrụị na-eri nrinke ọma.
Brad Pitt ọ bụ vegan?
Brad Pittkemgbeveganruo ọtụtụ afọ tupu ọtụtụ ndị amata ọbụlagodi na ọ nweghị mgbe ihere na-ezo ịkpọasị ya maka anụ uhie. Ọ na-ekwukarị banyere otu ọ na-adị asị ịhụ ndị mmekọ ya na ụmụaka na-eri anụ anụmanụ.Sep 21 2018
Ọ bụ Leonardo DiCaprio vegan?
Leon'ezie tinyere onwe ya n'ọrụ a site na ịgọnarị anaghị eri anụ ya. Site na mmegide gburugburu ebe obibi ya, ọ bụghị ihe ijuanya naDiCapriobụonye anaghị eri anụ, na-abụ akụkụ nke nnukwu ìgwè ndị siri n’erighị anụ.Eprel 9 2021